रूपको घमण्ड गर्न थालेपछि असह्य भएर एसिड आक्रमण गर्ने योजना बनाएको आलमको बयान – Khabar PatrikaNp
रूपको घमण्ड गर्न थालेपछि असह्य भएर एसिड आक्रमण गर्ने योजना बनाएको आलमको बयान
July 29, 2020 882
काठमाडौं, १० साउन । पछिल्लो समय युवतीहरु एसिड आक्रमणको निशानामा परिरहेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने एकतर्फी माया र त्यसको कुन्ठाका रुपमा एसिडलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसलाई ‘इगो’ ठानेर पुरुषहरुले एसिडलाई पुरुषत्वको वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तै, प्रेम प्रस्ताव नस्वीकार्दा वा कसैले गरेको प्रेमलाई नर्कार्दा एसिड आक्रमणमा परेकी हुन्, २२ वर्षीया पवित्रा कार्की ।
ओखलढुङ्गाकी पवित्रा कार्की केही समययता काठमाडौंको एक तारे होटलमा काम गर्थिन् । लकडाउनको कहर छिचोल्दै उनको दैनिकी भर्खर लयमा फर्कन थालेको थियो । प्रायः उनी बाफलस्थित साँइली दिदीको डेरामा बस्थिन् ।
पवित्रा बिहीबार साँझ दही चिउरा लिनको लागि चोकमा निस्किएकी थिइन् । बेलुका खाना खान मन नभएको बरु दही चिउरा खाउ भन्दै पवित्रा भक्तपरे जुःजु धौँ लिन सितापाइलाको एक डेरीमा गएकी थिइन् । दही किनेर आउने क्रममा आलमले पवित्रालाई तल्लो चोकसम्म बाइकमा छाडिदिएका थिए । सोही चोकबाट आउने क्रममा पवित्राको घर नजिकै एउटा केटा तलतिर फर्किएर उभिएर बसेको पवित्राले देखेकी थिइन्, जस्ले नै पवित्रामाथि एसिड प्रहार गरेका थिए । आत्तिएर कोठामा फर्किएकी पवित्राको अवस्थालाई देखेपछि उनलाई तजाब आक्रमण भएको छिमेकी तथा उनका आफन्तले अनुमान लगाए । सोही क्रममा तत्काल प्रहरीलाई खबर गरे ।
एसिड प्रहारको घटनाको सूचना पाउनेबित्तिकै संलग्नको खोजीमा जुटेको प्रहरीले धेरै अलमलिनु परेन । सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी र पीडितको प्रारम्भिक बयानकै आधारमा एसिड आक्रमण गर्ने र योजनाकार दुवैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सफल भयो ।
पवित्राको कल डिटेल्सबाट
घटना घटेपछि प्रहरीले घटनामा पीडित पवित्रा कार्कीको मोबाइलको कल डिटेल निकाल्यो । जसले प्रहरीलाई अनुसन्धानका सूत्र पर्याप्त भयो । बाफलमा सामान किन्न गएकी उनलाई ३ घण्टाको बीचमा मात्रै मोहम्मद आलमले आफ्नो र मुन्ना महमदको मोबाइलबाट ३७ पटकभन्दा बढी मिस्डकल गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
डल्लुका गार्मेन्ट सञ्चालक ४७ वर्षीय आलम र उनका भारतीय कामदार महमद पक्राउ घटनाको तीन घण्टापछि नै परेका हुन् ।
प्रहरीले जनाए अनुसार आलमको योजनामा मुन्नाले एसिड प्रहार गरेका हुन् । मुन्ना स्वयमले पनि बयानको क्रममा आलमले नै एसिड हान्न लगाएको बताईसकेको छन् । त्यसो त तयारी झोलालगायत सामान उत्पादन गर्ने आलमको कारखाना र कार्कीको डेरा नजिकै छ । उनकी दुई दिदी पनि केही वर्ष पहिले आलमकै कारखानामा काम गर्थिन् । पवित्राले पनि करीब १४ महिना सोही कम्पनीमा काम गरेकी थिइन् । होटलमा लेखा कर्मचारीको काम पाएपछि भने उनले आलमको गार्मेन्ट छाडेकी थिइन ।
सामाजिक सञ्जालमा पवित्राले ब्लक गरेकी थिइन्
पवित्राले आलमको हेराइ ठीक नलागेको र सामाजिक सञ्जालमा ब्लक गरेको प्रहरीलाई जनाएकी छिन् । कुराकानीबाट नियतमा खोट बुझेपछि उनले फेसबुक र म्यासेन्जरबाट आलमलाई ब्लक मात्रै गरेकी थिइनन्, मोबाइलमा कल नै रिसिभ गर्न पनि छाडेकी थिइन् । आफन्तसंग फोनमा कुराकानी गर्दापनि कता रु किन जस्ता प्रश्न गरेर आलमले हैरान पार्ने गरेको पवित्राले उनी साँइली दिदीसंग भन्दै आएकी थिइन् ।
आलम : १९ र १७ वर्षीय सन्तानका पिता
पवित्रा एसिड आक्रमण गर्न लगाउने योजनाकार आलमको १९ वर्षीया वर्षकी छोरी तथा १७ वर्षका छोरा छन् । आलम पनि श्रीमती र छोरा छोरीसंगै बस्दै आएका छन् । एसिड प्रहार गर्ने मुन्ना पनि श्रीमती र ८ महिनाकी छोरीसहित डल्लुमै बस्दै आएका छन ।
प्रहरीको नियन्त्रणपछि आलमले प्रारम्भिक बयानमा पवित्रालाई आफुले मन पराएको तर पबित्राले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार नगरेको झोँकमा एसिड आक्रमण सम्मको योजनामा पुगेको बताएका छन् । केही समय अघिबाटै प्रेम प्रस्ताव राखेको उनले बयान दिएका छन् । आलमले बयानको क्रममा भनेका छन्, ‘उनले रूपको साह्रै घमण्ड गरिन्, मैले मन पराउँथें तर कुनै मतलव नै गर्दिन थिइन्,’ ‘रूपको घमण्ड गर्न थालेपछि मलाई असह्य भएर एसिड हान्ने योजना बनाएँ ।’
एसिड प्रहार गर्नेविरुद्धको कानुन के छ ?
एसिड आक्रमण गर्नेलाई १८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ । एसिड हानेर घाइते मानिसको ज्यान गएमा त्यसलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा लाग्ने प्रावधान मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा छ । आक्रमण गरेर शरीर कुरूप बनाउनेमाथि ज्यान मार्ने उद्योग र एसिड प्रहार गरी शरीर कुरूप बनाएका दुई कसुरमा मुद्दा चल्ने संहितामा उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८३ ९२० मा कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनु हुँदैन । यस्तो कसुर गर्ने र गराउनेलाई १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । संहिताको दफा १९३ अनुसार तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्नेलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अंग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु¥याएमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
सामाजिक सञ्जालमा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुन र आक्रमणकारीको चर्को विरोध
एसिड अर्थात् तेजाब प्रहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितको न्यायिक उपचारका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
तर कानून मन्त्रालयले गत वर्ष संशोधित कानूनमा एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई पहिलेको तुलनामा सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मात्रा बढाइएको र संसदमा पेश भएको अपराध संहिताको विधेयकमा कारबाही थप कडा बनाउन प्रस्ताव गरेको बताएको छ । आफूले भनेको कुरामा सहमति नजनाएको भन्दै बर्षेनी महिलाहरु माथि एसिड प्रहारका घटना बाहिर आउने गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा नियमा कार्यन्वयनमा नै समस्या भएको र अपराधीले सजिलै उन्मूक्ति पाउने भन्दै विद्यमान नियमको नै विरोध भइरहेको छ ।
पीडितहरुको उपचारमा ठूलो समस्या
विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले शरीरमा एसिड हानिएका पीडितहरुको उपचारमा ठूलो समस्या देखिएको र क्षतिपूर्तिका लागि पनि अदालतकै फैसला कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइन्छ । तर कानून मन्त्रालयले एसिड आक्रमणको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएरै त्यस्तो अपराधमा संलग्नलाई दिइने सजाय र पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति गत वर्ष बढाएको छ ।
यसैको गम्भीरताको कारण नै अङ्गभङ्ग भएको मानेर आठ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको हो। अङ्गभङ्गको अरु सजायलाई हेर्दा यसलाई अधिक नै सजायको व्यवस्था गरिएको हो। थपिएको सजाय अनुसार बढीमा ८ वर्षको जेल सजाय र पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको छ ।
एसिड आक्रमणका केही घटना :
– २०७० साल वैशाख ९ गते : प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै हेटौंडाकी १९ वर्षीया युवतीमाथि भारतीय नागरिक दिलिप राजकिशोरद्वारा एसिड आक्रमण ।
– २०७१ फागुन १० गते : काठमाडौं वसन्तपुरमा जीवन विश्वकर्माद्वारा संगीता र सीमा बस्नेतमाथि एसिड प्रहार ।
– २०७३ माघ : नवलपरासीकी २७ वर्षीया तुलसा सापकोटामाथि सुनील कोइरालाद्वारा एसिड प्रहार । उपचारका क्रममा मृत्यु ।
– सिरहाकी १४ वर्षकी एक किशोरीको बलात्कारपछि एसिड खन्याएर हत्या ।
– २०७४ वैशाख ९ गते : चितवन भरतपुर महानगरपालिका–४ मा डेरा गरी बस्ने गोर्खाकी कल्पना श्रेष्ठलाई ट्राफिक प्रहरीका नायब निरीक्षक रामचन्द्र खनियाँद्वारा एसिड प्रहार ।
– २०७५ भदौ २६ गते : यौन प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा छिमेकी रामबाबु पासवानद्वारा रौतहट चन्द्रनिगाहापुरकी सम्झना दासमाथि एसिड प्रहार । उपचारका क्रममा मृत्यु ।
– २०७५ असोज आठ गते : नबलपरासी कावासोतीकी वसन्ती परियारलाई छिमेकी बिमल श्रीपालीद्वारा एसिड प्रहार ।
– २०७६ जेठ १ गते : कालोपुलमा २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि काभ्रे घर भएका २८ वर्षीय विष्णु भुजेलद्वारा एसिड प्रहार ।
– २०७६ भदौ २० गते : वीरगञ्जमा १५ वर्षीया किशोरी मुस्कान खातुनलाई समसाद आलम र मजिद आलमद्वारा एसिड प्रहार
– २०७६ फागुन २५ गते : कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा छिमेकी हरिनारायण वरईले ५१ वर्षीया बेदमतीदेवी गुप्तामाथि एसिड प्रहार ।
– २०७७ साउन ८ गते : काठमाडौँको सीतापाइलामा २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीमाथि मोहम्मद आलम र भारतीय नागरिक मुन्ना महम्मदद्वारा एसिड प्रहार ।
Prevबाँदरमा प्रयोग गरेको खोपबाट मोडर्ना कम्पनीले पायो सफलता !
Nextचालू आर्थिक वर्षको बजेटअघि नै ‘अर्डर’ भएका करिब डेढ सय विद्युतीय गाडी भन्सारमै रोकिएका छन्
भर्खरै आयो दुखद खबर। सेयर गरौ
राति सुत्दा यी सामाग्रीहरु भुलेर पनि आफु सुत्ने खाट तथा सिरानी वरिपरि राख्ने गर्नु हुदैन
होसियार ! यस्ता संकेत देखिएमा हुनसक्छ आँखामा इन्फेक्सन, बनाउँनसक्छ दृष्टिबिहिन..
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15922)
छलफल र बहसले पार्टीलाई नै फाइदा पुग्छ: मन्त्री पुन
सुत्नु अघि सुपा देउराली माइको दर्शन गर्दै ,भोलि मंसिर १६ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,भोलि मंसिर १६ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल !
गणेश भगवानको दर्शन गर्नुहोस भोलि मंसिर ,१६ गते मंगलबार यस्तो छ तपाईको राशिफल !